Jawaabta su’aalaha ku saabsan afkahooyo iyo gargaarka afkahooyo
Jaa helly kara gargaarka afkahooyo?
Caruurta af kale ku hadasha oon Iswiidishka ahayn, oo la wadaagta af midkood waalidka.caruuto waa in ay hellan saldhig aqoon af oo ku haboon da’dooda. Sida caadiga ah haddii waxa laga rabo ay booxiyaan, waxay xaq u leeyihiin gargaarka afkahooyo.
Maxaan samayn marka aan rabo in ilmahaygo hello gargaarka afkahooyo?
Waa in aad xanaanada ilmahago tago u godbisa codsigaga in aad u rabto ilmahaaga gargaarka afkahooyo .markasa madaxda xanaanada ayaa u soo godbin codsigaga qaybta qaabilsan gargaarka afkahooyo, kuwaas oo diwaan galinaya ilmaha.kadibna waxaa la xiriiri xanaanada barre afkahooyo, waxayna isla meel dhigin sida ugu haboon oo loo fullin gargaarka.
Maxay muhiim u tahay in ilmaha afkahooyo loo xoojiyo?
Waxay ilmaha siineysa fursada in uu wax la qaybsado qoyskiisa iyo qaraabadiisa. Afkahooyo oo u dhab u barto ilmoho waxay u xoojin barashada iswiidishka. Midoga yurub waxay qoreen 8 qodob oo fure u ah in uu muwaadinko hello taas. labbo ka mid ah waa inuu mowaadinko xiriir ku samayn karo afkiisa iyo afka qalaadba.waana in uu ogyahay in dhaqanko yahay wax qiimo leh oo ay gacmaha ishaystan luqada.
Ilaa da’dee ilmahaygo helli kara gargaarka afkahooyo?
Laga bilaabo marka ilmoho bilaabo xanaanada taas oo ku xiran fursadaha jira.
Xagee ka hellaya ilmahaygo gargaarka afkahooyo?
Baraha afkahooyo ayaa kula kulmaya ilmaha xanaanada uu tago ama tan u dhow,luqadaha qaar waxay ku bixiyaan gargaarka xarun bartamaha magaalada ku taal.
Sidee u shaqeeya baraha afkahooyo?
Wuxuu u shaqaya sida shaqaalaha xanaanada ayada oo la raacayo qorshaha waxbarasho iyo qoraalada kale. Waxaaney la hawlgalan shaqa maalmeedka xanaanada oo goox goox caruurta wax u bartan.wada xiriirinta dhaqamada ayuu ilmoho ka helaya horuma iyo awood uu ku garto kala dowanaanta aadamaha, wuxuuna helaya sahay uu ku garto aduunka ku xeeran.
Yaa bixin kharashka?
Dawlada hoose ee Uppsala.
Ma awooda ilmahaygo in uu ka soo baxo luqado kala dowan isku wakhti?
Ilmoho waxay ka bixi karan in ay bartaan luqada dhowr ah isku wakhti.
Maxaan ku caawimi kara ilmahayga in aan u xoojiyo afkahooyo?
Wax badan la hadal, kulana hadal luqad ka sareysa tan uu ku hadlo, si uu hodan uga noqdo luqada. Waa muhiim in aad af sax ah isticmaasho oo aad wax ugu fasirto, masalan: ma ku ridi karta gaariga guduudan danbiisha cawda ah, intii aad oran lahayd ku rid halkas.Wax akhrisko waa muhiim aad ah, ka soo immaaho buugag maktabada! La kulan dad kale iyo caruuro ku hadla afkagahooyo.
Waxaano ku hadala luqad gurriga,mawaney aad u wanaagsaneyn in iswiidishka lagu hadlo waayo waa luqada inta badani ku hadasho iswiidan,xataa hadayan ahayn afkeygii hooyo?
Waxaa markasta wanaagsan in aad ku hadasho afkaga hooyo.waa luqadad si wacan ugu hadli karto, oo aad ad ugu fiicantahay, oo aad ku godbin karto dareenkaga si kala dowan. Sidaas darteed ilmoho wuxuu maqlaya luqad hodon ah oo booxda oo uu qaadan karo.